PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-21 - Masiqaphele izikhathi songe imali
Masiqaphele izikhathi songe imali
SIYABINGELELA onyakeni omusha, ngethemba lokuthi sonke siwuqala kahle, futhi ngomfutho okhombisayo ukuthi kudala siwulindele.
Phela ngasekupheleni konyaka owedlule bese silokhu sithi hamba nyaka omdala ukuze samukele omusha.
Esikwaziyo nokho wukuthi noma kusuke kuyisikhathi esihle lesi, lapho wonke umuntu esuke ebona ngendlela entsha zonke izinto ezimayelana nempilo yakhe, kodwa sonke futhi siyazi ukuthi yona le nyanga ayize ingaba yinyanga emnandi kwabaningi.
Ziningi izizathu eziholela kulokho, esinye sazo wukungabi namali.
Uma ubuza ukuthi ngabe yini yona le eqeda imali, okuthi kufika lesi sikhathi sonke sibe sesikhala ubumayemaye, ayize ingatholakala impendulo ecacile, kodwa kuye kube kungukuthi sonke kumele siqonde ukuthi siphuma esikhathini lapho siyisebenzise khona kakhulu.
Lesi sizathu siyiqiniso elingeke lize liphikwe kodwa okuyaye kuxake kakhulu wukuthi kanti yisoze sifunde nini ukusilungiselela leso sikhathi esinengcindezi engaka yokusetshenziswa kwemali?
Ukulungiselela leso sikhathi kusho ukuthi uyayazi imali ozoyisebenzisela ukuthenga ngesikhathi sikakhisimuzi lapho wonke umuntu egijimela ukuyothenga ngaphandle kokucabangela ikusasa.
Ukuyazi imali ozoyisebenzisa ngalesi sikhathi kusho ukuthi uyazi ukuthi uma kuqalwa unyaka sekubuyela izingane esikoleni, futhi nawe usubuyela emsebenzini kube wukuthi awunankinga etheni yezezimali ngoba phela awuyisebenzisanga budlabha, kodwa uyilondolozile.
Ukungasebenzisi budlabha imali ngozibandlela kukusiza ekutheni noma kukhalwa ngapha nangapha, kodwa wena ube nokuthula enhliziyweni yakho, kuze kufike isikhathi esilandelayo sokuthola umholo.
Iseluleko enginaso kulesi sikhathi sokuqala konyaka, singu- kuthi zifundise ukuqaphela izikhathi.
Njengoba sisekuqaleni konyaka, cishe wonke umuntu unezinqumo ezintsha, ngazo afisa ukwenza ngcono isimo sempilo yakhe, okungaba ngokwezezimali, ukuthuthukiswa kwemindeni, ukuthuthukisa imfundo kanye nokuningi okumayelana nempilo yakhe.
Kulezo zinqumo ezintsha esizithathile sonke, okubalulekile kakhulu wukuma kuzo, singazizibi isikhathi sibe sihamba. Kuyoba yinto ebuhlungu ukuthi kade unezinqumo ezinhle kangaka ekuqaleni konyaka, kodwa ngenxa yokuvilapha kwakho, ugcine ungasukumanga isikhathi sisekhona, uphaphame sekuyophela usuyophela unyaka, abanye ontanga yakho sebekude nohambo olubheke empumelelweni.
Intshisekelo yokuba nezinqumo ezintsha onyakeni omusha kumele zihambisane nokusukuma kwakho, uzikhandle, uzincishe injabulo esikhathini sakho esiningi, ukuze uyigcinele isikhathi lapho uyobe usuvuna khona okuhle okutshalile ngezithukuthuku zakho zonyaka wonke.
Izinsuku esizinikiwe onyakeni ziningi ngokwanele ukuze ngazo sakhe ikusasa elihle, eliqhakazile nelingafiswa ngabanye abantu. Sukuma kusemanje, ufingqe imikhono, ubheke ensimini, ushe umsebenzi. Uyozincoma ngokwenzenjalo.